Xukuumadda cusub oo ay ka soo muuqan doonaan xubno aad ugu dhowaa Madaxweynihii hore | Baydhabo Online
Xukuumadda cusub oo ay ka soo muuqan doonaan xubno aad ugu dhowaa Madaxweynihii hore
Kaddib markii maanta Golaha Shacabka ay si buuxda kalsoonida u siiyeen Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa soo ifbaxay warar sheegaya in rag ku dhowaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud loo badinayo inay ka soo muuqdaan Golaha Wasiirada ee xukuumada dhowaan uu soo dhisi doono Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Ilo wareedyo ay heleyso Jowhar.com ayaa sheegaya in wada tashadii Ra’iisul Wasaaraha uu la lahaa Xildhibaanada ee ku aadanaa kalsooni siintiisa ay bar bar socotay wada tashiyada dhismaha Xukuumaddiisa cusub, waxaana soo baxaya in wajiga hore ee wada tashiyada uu ku soo dhisayo Golaha Wasiirada ay soo gaba gaboobeen.
Xukuumadda cusub ee la soo dhisi doono ayaa noqon doonta kuwa ay ka soo muuqdaan xubno kala duwan oo isugu jira Wasiiro hore, Xildhibaano kooban iyo qaar saaxib dhow la ah Madaxda xilligan oo horay balan-qaadyo loo sameeyay intii ololaha socday.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayay u badan tahay in Golaha Wasiirada uu ku soo daro xubno aad ugu dhowaa Madaxweynihii hore, qaarkood ayaa laga yaabaa in soo laabashadooda ay noqoto mid lama filaan ah.
Mr Kheyre oo ka mid ahaa Guddigii sare ee Ololaha Madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh ayaa ah nin saaxibo ku lahaa kooxdaas, isla markaana aad loogu badinayo inay noqdaan kuwo mar kale garbihiisa ku buuxiya Xukuumadiisa.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ah nin lagu sheego inuu leeyahay aragti fog ayaa doonaya inuu soo dhiso xukuumad kooxaha Siyaasada dalka ay iska wada arkaan, si guulo looga gaaro howlaha Xukuumadiisa hor yaala.
Tirada ragga ku dhowaa Madaxweynihii hore Xasan Sheekh ee lagu wado inay ka soo mid noqdaan Xukuumada cusub ayaa aad u yar, marka loo fiiriyo tirada guud ee wasiirada Xukuumada cusub ka soo muuqan doona oo la sheegayo inay noqon doonto 30 wasiir, 30 Wasiir ku xigeen iyo 10 Wasiirul Dowle.